လန်ဒန်က ကမ်ဘာကျော် Kew Gardens “ကြူး” ပန်းခြံ – XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » လန်ဒန်က ကမ်ဘာကျော် Kew Gardens “ကြူး” ပန်းခြံ – XIII
လန်ဒန်က ကမ်ဘာကျော် Kew Gardens “ကြူး” ပန်းခြံ – XIII
Posted by Kyaemon on Nov 10, 2012 in Education, Photography, Sciences & Resources, Style & Beauty, Travel |6comments
ဒေါ်စုရောက်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ကို ဒို့လဲစိတ်ကူးဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်ဖြစ်အောင် ‘ရောက် ‘ ခဲ့ ပြီး
ယူကေပါလီမန် ကို ‘လေ့လာ’ ခဲ့တာစုံသလောက်ပါ၊
ခုလဲကမ်ဘာ့အမွေအနစ်ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်နားက KewGardens ‘ကြူး’ ပန်းခြံကိုဝင်ကြည့်ရအောင်၊
ဝင်ကြေး က အင်ဂလိပ်ငွေ ပေါင်စတာလင် ၁၄.၅၀ (၁၉၇၂၆ ကျပ်) ( $၂၃.၁၆) လို့ဆိုပေမဲ့ ငွေမကုန်ရဘဲနဲ့အခမဲ့ ဝင်ကြည့်ရအောင်၊
Stretch Horizon ဆိုတဲ့ ပန်းဥယျာဉ် အဆောက်အဦ, Kews Garden
Stretch Horizon, Kews Garden | Flickr – Photo Sharing!
တွဲလောင်းကျ အပင် ရိုင်း တမျိုး
Wild Falling Plant in Kews Garden
Wild Falling Plant in Kews Garden | Flickr – Photo Sharing!
Search results for kews gardens
(အပူပိုင်းဒေသအပင်တွေရှိရာ)Palm House ‘ထန်းပင်အိမ်’ဆိုတဲ့ ပန်းဥယျာဉ် အဆောက်အဦ
Palm House | Flickr – Photo Sharing!
Kew Museum ပန်းပင်အပင်များ ပြတိုက် (၁)
Kew Museum 1 | Flickr – Photo Sharing!
Kew Pagoda ဘုံအဆင့်ဆင့်မြင့်ထွန်းသားနားတဲ့တရုပ်လိုဘုရားစေတီ
Kew Pagoda | Flickr – Photo Sharing!
Kews Peacock | Flickr – Photo Sharing!
Kew Gardens –aset on Flickr
Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပြီးပုံတွေကိုကြည့်နိုင်တာပါ၊
“Kew ကြူးဥယျာဉ်မှာ ဖြူနီဝါပြာ ရောင်စုံ ဝေဖြာ နေပါတယ်”
Kew’s dripping with colour display’s –aset on Flickr
Kew’s dripping with colour display’s
IMG_1706 | Flickr – Photo Sharing!
Orchid’s @ Kew gardens
တနေ့တပုံ ရိုက်ပြီးစုဆောင်းရင်း ရာသီစုံက ရိုက်ချက်တွေဟာ ထောင်ကျော်လာတာ၊
သဲကန်တာရ အပူပိုင် က Cactus ရှားစောင်း အဆူးပင်
Cactus ရှားစောင်း အဆူးပင်
What’s On At Kew Gardens – David Nash At Kew, A Natural Gallery
အင်ဒိုနီးရှား က ဖြစ်ပြီး၊မြင်းသေကောင် ပုတ်သိုးတဲ့အနံ့ထွက်တာ ကယင်ကောင်တွေကို’ဆွယ်’တာ၊
ပန်းပွင့် ‘ခဲ’ လို့ ပွင့်တဲ့အခါ မှာ ပုတ်သိုးနှံ့ကို မကြိုက်ပေမဲ့ လူတွေကအုံးအုံးကြက်ကြက် တန်းစီလို့သွားကြည့်ကြတာ၊
တရုပ်ဂိတ်ပုံစံကဆင်းသက် လာတာလို့ဆိုတဲ့ ဂျပန်မြို့တမြို့က မြို့ဝင်ဂိတ်ကြီး
၁၇၆၂ က တရုပ်စေတီပုံတူဆောက်လုပ်တာ၊
ဘုံ တဆင့် တဆင့် မှာ အနား ရှစ် ခုစီ ရှိကြပြီး
ဘုံအထပ်တွေက ဆယ် ထပ် ရှိတာ၊
အောက်ဆုံးထပ် ရဲ့စက်ဝိုင်းအချင်းက ၄၉ ပေရှိပြီး
အဆောက်အဦက ၁၆၃ ပေ (၁၅ ထပ် လောက်) ရှိတာ၊
Each storey finishes withaprojecting roof, after the Chinese manner, originally covered with ceramic tiles and adorned with large dragons;
Royal Botanic Gardens, Kew – Wikipedia, the free encyclopedia
Kew ကြူး ပန်းခြံ က ဧက ၃၀၀ ကျယ်ပြီး၊ လန်ဒန်ရဲ့အနောက်တောင် Kew ကြူးနဲ့Richmond ရပ်များအကြားမှာရှိတာ၊
ကြူး ပန်းခြံ မှာ အလုပ်သမား ၇၀၀ ရှိပြီး
မတ်လ ၃၁ ရက် ၂၀၀၈ ကုန်ဆုံးတဲ့ဘဏ်ဋာရေး နှစ်မှာဆိုရင်
အင်ဂလိပ်ငွေပေါင်စလင် ၅၆ သန်း ဝင်ငွေရခဲ့တာ၊
အဲဒီနှစ်မှာလဲ ဧည့်သယ်ပရိသတ်ပေါင်း ၂သန်း ခန့်လာကြည့်ကြတာ၊
၁၇၅၉ က ဒီပန်းခြံကိုစတင်တည်ထောင်ပြီး ၂၀၀၉ မှာဆိုရင် ၂၅၀ မြောက်နှစ်ဖြစ်လို့
The Royal Botanic Gardens, Kew, usually referred to as Kew Gardens, comprises 121 hectares of gardens and botanical glasshouses between Richmond and Kew in southwest London, England. “The Royal Botanic Gardens, Kew” and the brand name “Kew” are also used as umbrella terms for the institution that runs both the gardens at Kew and Wakehurst Place gardens in Sussex. The Royal Botanic Gardens, Kew,anon-departmental public body sponsored by the Department for Environment, Food and Rural Affairs, is an internationally important botanical research and education institution with 700 staff and an income of £56 million for the year ended 31 March 2008, as well asavisitor attraction receiving almost two million visits in that year. Created in 1759, the gardens celebrated their 250th anniversary in 2009.
အပင်တွေရဲ့လောက – မိတ်ဆက်
David Attenborough’s Kingdom of Plants – Introduction – YouTube
David Attenborough’s Kingdom of Plants – Now available on iPad – YouTube
Fungi မှိုတွေအကြောင်း အပင်နဲ့မှိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြု
Beyond the Gardens – The Fungarium at Kew Gardens – YouTube
The largest organism in the world isamushroom that is over 1,000 years old, covering hundreds of acres inaforest in Oregon USA. All plants on Earth relay on fungi to live, and fungi out number plants six to one. Kew has the largest collection of dried fungi in the world, around 1.25 million specimens.
Find out more about Kew’s amazing scientific work and collections – http://www.kew.org/science-conservation/index.htm
‘ကြူး’ ပန်းခြံက လက်ရွေးစင်တွေ
The best of London’s Kew Gardens – YouTube
The Royal Botanic Gardens, Kew, usually referred to simply as Kew Gardens, are extensive gardens and botanical glasshouses between Richmond and Kew in southwest London, England. Created in 1759, the gardens celebrated their 250th anniversary in 2009.
Waterlily House (Pls Watch in Full HD 720 or 1080 ) – YouTube
ကြာပန်းပေါ်ကလေးတင်နိုင်တာ၊ ၂၀၀ ပေါင် ထိ တင်နိုင်တာဆိုဘဲ
Baby Allison on the Victoria – YouTube
Days Out Guide – Royal Botanic Gardens, Kew tickets 2for1 offers
2FOR1 Royal Botanic Gardens Kew
This offer expires on 30 April 2013
Show your National Rail train tickets when arriving at the attraction.
အရမ်းအရမ်း လှပါတယ်……………………… အရမ်းအရမ်း မိုက်ပါတယ်
ကျုပ်တို့ ဆီက ဒေါင်းနဲ့ ယှဉ်ရင်
လန်ဒန်နားက KewGardens ‘ကြူး’ ပန်းခြံကိုဝင်ကြည့်ရအောင်၊
ဝင်ကြေး က အင်ဂလိပ်ငွေ ပေါင်စတာလင် ၁၄.၅၀ (၁၉၇၂၆ ကျပ်) ( $၂၃.၁၆) လို့ဆိုပေမဲ့ ငွေမကုန်၊ ခရီးစရိတ်မကုန်ပဲ အခမဲ့ ကြည့်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပဲ။ :hee:
လွယ်လွယ်နဲ့ဖြေရင်တော့ မြန်မာ ရွှေဥဒေါင်းကအလှဆုံးပေါ့ဗျာ၊
သို့သော် သိပ်မကျွမ်းတာ မသေချာတာနဲ့လိုက်ရှာရတာကအောက်ပါအတိုင်းပါ၊
ကမ်ဘာမှာ ဒေါင်းအမျိုးအစားအုပ်စုကြီး သုံး စု ရှိကြောင်း၊
တတိယ အမျိုးအစား အာဖရိက ဟာကသိပ်မလှပါလို့ရေးကြကြောင်း၊
ပဌမအမျိုးအစား အိန်ဒိယတောင်ပိုင်း က ရင်ဘတ်အပြာရောင်(Kew Gardensကြူးပန်းခြံ က ဒေါင်းပုံလို)ကလဲမဆိုးပါ၊
ဒုတိယအမျိုးအစားကအစိမ်းရောင်ရင်ဘတ်နဲ့ မြန်မာ၊အိန်ဒိယမြောက်ပိုင်း၊တရုပ်ယူနန် ပြည်နယ်၊
…..There are but two naturally occuring peacock species, the Indian peafowl Pavo cristatus from India, often called Blue peafowl (shown on the cover of the Game Bird Breeders Gazette magazine and child with feathers, upper left), and the Green peafowl Pavo muticus which lives farther east in Burma, Thailand, Indo China, Malaya and Java. It is curiously absent from Sumatra and Borneo. The latter peafowl has three subspecies: Spicifer in Western Burma,aduller, bluer race; Imperator in Eastern Burma, Thailand and Indo China, much brighter wid greener: and muticus in Java, which is still more brilliant. The last two are usually kept in America at present, and probably mixed, but for practical purposes they are just the same, the differences being noticeable only on close examination.
There are many mutations and breeds of peacocks that have been developed and are commonly available from peacock breeders. The India Blue Peacock is commonly kept and bred in captivity by people across America and around the world. They are not expensive and thousands of them are bought and sold each year (see classified ad section of the Game Bird Gazette magazine). They are hearty and easy to keep, even in cold districts. The Green species is not bred as often as the India Blue and is therefore more expensive. You can see that the tail of the green peacock is exceptionally beautiful! The Green is more susceptible to cold and needs to receive adequate protection from the cold.
Peafowl can be quite sociable and often display their feathers right in front of you in the springtime. The male peacock in the spring displays his gorgeous tail feathers and also utters an awakening call which is loud yet quite delight to hear!…..
ပုံတွေအတွက်တကယ့် ကို ကျေးဇူးပါ။
ကြေးမုံ the great says:
မမကြေးမုံက တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ မြန်ကျင့်ပြည်နယ် နိုင်ငံရေးမှူးလို့ ကိုကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ အဟုတ်လား။ မြစ်ဆုံရေကာတာ ပြီးသွားရင် မမကြေးမုံ သူဌေးမဂျီး ဖြစ်ပြီဆို။ ချမ်းသာသွားရင် သူ့ကိုခွဲသွားမှာစိုးလို့ လိုက်ကန့်လန့် တိုက်နေရတာတဲ့။ သနားပါတယ်နော် ပြန်ခြစ်လိုက်ပါဗျာ… ခုတလော ငလျင်ကလည်း လှုပ်ပါသဘိနဲ့… :buu: